युएईमा कार्यरत घरेलु कामदारको प्रश्न–हामीलाई गरिखान नदिने हो सरकार ? ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
युएईमा कार्यरत घरेलु कामदारको प्रश्न–हामीलाई गरिखान नदिने हो सरकार ?
By नेपाली कान्छा on 12:29 AM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
युएई । भैरवा अञ्चरपुकी सरिता गिरीको बुबाको अघिल्लो वर्षको माघमा निधन भयो । विदेशमा कार्यरत गिरी बुबाको निधन हुँदा तत्काल घर जान सकिनन् । कारण थियो, घरेलु कामदारलाई छुटि्टमा आएपछि पुनः र्फकन नपाउने सरकारी नीति ।
सरिता ५ वर्षदेखि युएईमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छिन् । देशमा बसेर परिवार पाल्न कठिनाइ भयो । त्यसपछि उनी रोजगारीका लागि युएई आइन् । यहाँ राम्रो सेवासुविधा र काम पाएकी छिन् । तर, यो कुरा हाम्रो सरकारले किन बुझ्दैन ? सरिताको असन्तुष्टि सरकारसँग छ । उनी भन्छिन्, ‘दुःख पाएकाहरुलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । हामीलाई यहाँ राम्रो छ । तर, हामीमाथि नै अन्याय किन ? दुःख पाएको भए किन आउने थियौँ र ? भारतीय बाटो प्रयोग गरेर आउन पाइरहेका छन् नि ?’
बुबाको निधन भएको पाँच महिनापछि नेपाल गएर पुनः आउनका लागि उनी एजेन्टको सहायतामा पुगिन् । ७० हजार रुपैयाँ दिए सबैकुरा मिलाएर यहाँ ल्याउने एजेन्टले बताए । रकम दिन उनी तयार पनि भइन् । तर, अन्तिममा नेपालको अध्यागमनमा कडाइ गरेको जनाउँदै काम गर्न सकिदैन भनेर एजेन्ट पन्छिए ।
‘भाग्यले साथ दिए फर्किएर आउछु’ यहीँ निर्णयका साथ उनी छुटि्टमा नेपाल गइन् । जाँदा नेपालकै एयरपोर्ट प्रयोग गरिन् । तर, र्फकने बेलामा भारतीय एयरपोर्ट प्रयोग गर्न बाध्य भइन् ।
सरिता युएईमा एक भारतीय परिवारको घरमा काम गर्छिन् । हप्तामा एकदिन विदा मिल्छ । हरेक वर्ष नेपाल आउन जानका लागि रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध गराउँछन् ।
आगामी असारमा उनले वार्षिक विदा पाउँछिन् । परिवारको याद आउँछ । घर जान मन पनि छ । परिवारका सदस्यले कहिले आउने भनेर बारम्बार सोध्छन् । तर, नेपाल सरकारको नीतिका कारण उनी विदामा जान सक्दिनन् ।
सरकारलाई सरिताको प्रश्न छ – हाम्रो कुरामा विश्वास नलागे रोजगारदाता मार्फत बुझे हुन्छ । के हामीलाई गरिखान नदिने हो ? हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड किन सरकार ?
५ वर्षदेखि युएईमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत कपिलवस्तुकी रीता केसी पनि तीनवर्षदेखि नेपाल जान पाएकी छैनन् । आगामी असारमा उनी नेपाल र्फकन नपाएको तीनवर्ष पुग्छ ।
घरमा एक बच्चा, श्रीमान र आमाबुबा छन् । परिवारसँग फोनमा दिनहुँ कुरा हुन्छ । उनीहरुको एउटै प्रश्नउत्तर बारम्बार दोहोरिन्छ । घर कहिले आउने ? सहजै र्फकन पाए त आउने थिए नि ! परिवारलाई दिने उनको जवाफ यहीँ हो ।
सुरुमा भिजिटमा आएर दुईवर्ष सारजाहमा उनले घरकै काम गरिन् । त्यसपछि नेपाल गइन् । पुनः आएर दुवईमा एक भारतीय परिवारको घरमा काम गरिरहेकी छिन् ।
रीतालाई परिवारका सदस्यलाई जस्तै व्यवहार छ । सेवासुविधा राम्रो छ । वर्षमा एकपटक घर जान आउन टिकट मिल्छ । ‘नेपाल गएर र्फकन मिल्ने भए वर्षैपिच्छे जान मन छ । तर, सरकारले आउन दिदैन । के गर्ने ?’ दुखेसो पोख्दै भन्छिन्, ‘यहाँ राम्रो काम भएर त आउन खोजेको हो । तर हाम्रो कुरा किन सुनिदैन ?’
उनलाई कहिलेकाही सधैकालागि नेपाल र्फकने सोच आउँछ । तर, उता गएर के गर्ने ? परिवारको जिम्मेवारी पनि छ । यहीँ बाध्यताले अड्काउने गरेको छ ।
समस्या समाधानमा सरकारी बेवास्ता
सरिता र रीता प्रतिनिधि पात्र हुन् । यो घरेलु कामदारको साझा समस्या हो । ०७३ चैतदेखि खाडी मुलुकमा कार्यरत घरेलु कामदारले यो समस्या भोगिरहेका छन् ।
सरकारले श्रम स्वीकृति र भिसा लिएर पनि घरेलु काममा जान रोक लगाएको छ । साथै हाल काम गरिरहेकाहरु नेपाल आएर पुनः कार्यस्थलमा र्फकन पाएका छैनन् ।
०७२ वैशाख ८ मा तत्कालीन सरकारले घरेलु कामदार महिलासम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो । तर, उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेन । निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा अवैध तरिकाले महिला कामदार विदेशिने क्रम रोकिएको छैन ।
रोजगारीको प्रलोभमा विदेशमा पुगेर अलपत्र परेकाहरुलाई सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावास तथा सामाजिक संघसंस्थाले उद्दार गरेर पठाउने घट्नाले यसको पुष्टि गर्छ ।
त्यसो त यो प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रले दवाव दिइरहेका छन् । युएईमा नेपालबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री ,विभिन्न दलका शीर्ष नेता तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसम्मले उच्चस्तरीय लगायतको भ्रमण गरेका छन् । उक्त भ्रमणका समयमा घरेलु कामदारका कुरा उनीहरु समक्ष पुर्‍याइन्छ ।
गतवर्षको भदौमा एनआरएनको मध्यपूर्वीय भेलामा सहभागी हुन युएई आएकी खानेपानी मन्त्री विना मगर समक्ष महिलाको समस्या महिलाले बुझ्ने भन्दै यहाँ कार्यरत घरेलु महिला कामदारले गुनासो राखे ।
घरेेलु महिलाको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिदै समाधान गरिनेे मन्त्रीले आश्वासन पनि दिइन् । तर, त्यो आश्वासन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? सम्बन्धित प्रश्नकर्ताहरुले प्रतिप्रश्न गरिरहेका छन् ।
त्यसयता हुँदै आएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा पनि यो विषय उठान हुन्छ । अघिल्लो साता मात्र नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न भन्दै नेपालबाट सरकारी टोलीले युएईको भ्रमण गर्‍यो ।
श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, र वैदेशिक रोजगार विभागको टोलीले यूएईका विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफल गरेको थियो ।
यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिसँग समेत कामदारका विभिन्न विषयमा छलफल भयो । छलफलमा सहभागी एनआरएन प्रतिनिधिले कामदारको सुरक्षा, सेवा सुविधा ,घरेलु कामदार माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, भिजिट भिषाको समस्या समाधान लगायतका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरी समाधान खोज्न टोलीलाई सुझाए ।
तर, विदेशमा कार्यरत श्रमिकका नाममा नेपालबाट हुने सरकारी भ्रमणलाई राजनीतिक दलका प्रवासी संगठनका नेताले भने आलोचना गरेका छन्। श्रमिकको समस्या समाधान गर्न भन्दा भ्रमणका नाममा फजुल खर्च बढाएको भन्दै यसलाई रोक्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
हरेक पटक भ्रमणमा आएका सरकारी निकायलाई विषयको जानकारी गराउदाँ पनि समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाएको उनीहरुको आरोप छ ।
त्यस्तै भ्रमणमा सहभागीहरुले समस्याबारे जानकारी लिने तर परिणाममुखी योजना नबनाउने कामदारको समेत गुनासो छ ।
▼ 2019 (15791)
► June (686)
▼ April (2784)
प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र खोल्न माग
USAA Personal Loans Review
प्रधानमन्त्रीलाई कालोझण्डा देखाउने घिमिरे रिहा
सौतेनी आमासँग करणी गरेको आरोपमा युवक पक्राउ
ओलीले भने– निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्थ्यो, ...
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको आग्रह : न्यायाधीश बन्न...
बालुवाटार प्रकरणमा बिष्णु पौडेलको संलग्नता छैन, अन...
पत्रकार महर्जन रिहा
मजदुर दिवसमा हेमन्तको गीत रिलिज
वीरगञ्जको श्रीपुरमा भिषण आगलागी
बालुवाटार प्रकरणमा कांग्रेसको स्पष्टिकरण: दोषि को ...
केएनपी राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि एपिएफको पोल्ट...
मामाले दोस्रो बिहे गर्दा भान्जाको अपहरण
एपीएफले जित्यो राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि
दीपक भन्छन्–‘रेटिङ होइन, फिल्मले २०–२५ करोड कमाउनु...
फ्यानमाझ पूजाको यस्तो क्रेज
ठेकदारसँग रिसाए प्रधानमन्त्री ! मोबिलाइजेसनको पैसा...
हतकडी र बलपूर्वक अनुसन्धान हुन सक्दैन : माहान्याया...
समाजकल्याणको निर्णयविरुद्ध टुकुचा तरकारी बजार अदाल...
शेयर बजारमा दोहोरो अकंको गिरावट
समर्थकमाथि नै स्टार खेलाडी नेयमारले हात हालेपछि..
ओलीले खान्न भन्दाभन्दै सबै खाए : विश्वकर्मा
सम्पदाका सारथि, जसले गर्दा लुटेर खान गाह्रो छ !
प्रदेश १ को सम्पर्क राजधानी धनकुटा तोकियो
सत्यमोहन जोशीको जन्मदिनमा ललितपुरमा सार्वजनिक विदा...
पहिचानको खोजी गर्दै ‘लयात्मक अस्तित्व’ चित्रकला प्...
नागरिकसँग गरिएका प्रतिबद्धा पूरा गर्छौं- भीम रावल
१० वर्षीया बालिकाको आत्महत्या, बुवाबिरुद्ध बलात्का...
राष्ट्रपति भण्डारी बेइजिङबाट ल्हासा
कर्णाली प्रिमियर लिगमा न्यू होराइजन विजयी
प्राधिकरण पूर्वाग्रही कि पाइलट विजय लामा अनुशासनही...
जापानका राजा अकिहितोले गद्दी त्यागे
दुई महिनामै हिमाल आरोहणको रोयल्टी ५० करोड
शेयर बजार मंगलबार दोहोरो अङ्कले घट्यो
विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हट्दैन्- प्रधानम...
५० अर्बको बजेट ल्याउने प्रदेश ३ सरकारको तयारी, राज...
प्रधानमन्त्रीको सन्देश : विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हट...
हिमाल आरोहणको रोयल्टी दुई महिनामै ५० करोड
महिला टी–२० लिगको मिति परिवर्तन, खेल त्रिवि मैदानम...
संघ अन्तरगतका सडकको छिनोफानो नहुँदा बजेट बनाउन समस...
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे विष्णु पौडेलको बचाऊ
बालुवाटारमा बिष्णु पौडेलले जग्गा किन्दा राजाको शास...
Finance Minister heading to Fiji for ADB meeting
अण्डा बिक्री हुनै छाड्यो, व्यवसायी घाटामा
प्रचण्ड निवास पुगेका मेयर मेहता नेकपा नभई किन फर्क...
सरकारविरुद्ध नेविसंघसहित ११ विद्यार्थी संगठनको प्र...
साझा विवेकशीलको प्रस्ताव : नेपालीसँग बिहे गर्ने वि...
द्वन्द्व बल्झाउनेहरुसँग सरकार सजग छ- काननुमन्त्री ...
Chitwan man killed in rhino attack
Human rights commissioners protest govt bid to lim...
अर्थमन्त्री खतिवडा फिजी जाँदै
धर्मेन्द्रको ‘मैले बोल्दा देशको नक्सा हल्लिन्छ’ बज...
फल्कनरले भने – म समलिङ्गी होइन, गलत अर्थ लाग्यो
विप्लव नेकपाका जिल्ला इञ्चार्जसहित १० जना पक्राउ
Nepali met officials keeping eye on Cyclone Fani
भुवन भर्सेस अनमोलः कति भिन्न छ बाबुछोराको आनीबानी ...
काठमाडौं प्रहरी र अपराध महाशाखा अब छुट्टाछुट्टै स्...
जापानका राजा अकिहिताले गद्दीत्याग गर्दै
बुटवल-भैरहवा-लुम्बिनी जोडेर ‘मेघा सिटी’ बनाइने
एउटा साथीको साथले कति, फरक पार्दछ जिन्दगीमा
Nepal, Oman labour officials to finalise MoU draft...
स्थानीय तहलाई बैशाख २० भित्र रिक्त पदपूर्तिका लागि...
भत्किएको २ वर्षसम्म पुल बनेन, खोला तर्न घण्टौं हिँ...
अनेसास जापानको स्वर्ण शृङ्खला, पिपिरीको विमोचन
Kailali town tense after truck hit kills student
युवतीको मृत्युपछि कैलालीको लम्की तनावग्रस्त, प्रहर...
कानुनमन्त्री र मानवअधिकार आयोग पदाधिकारीबीच जुहारी...
कट्रिना भन्छिन्–‘रणवीरसँग ब्रेकअपपछि खराब समय बिता...
कैलालीको लम्की तनावग्रस्त, प्रहरी र प्रदर्शनकारी घ...
वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा १० वटा म्यानपावर कम्पनी...
अमर यादव नेतृत्वको सिंगो पार्टी नेकपामा समाहित
मधेसी जनताको हितमा नचले प्रदेश २ को सरकार ढालेर बी...
सरकार ! बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा देउवा दोषि भए तत्...
कांग्रेस शीर्ष नेतामा बेल्जियम विवाद बल्झियो, विवा...
राष्ट्रपति भण्डारीलाई ग्रेटहलमा भव्य स्वागत ( फोटो...
‘अमेरिका प्रजातन्त्रको नाममा विश्वभरि नरसंहार गरिर...
गैर आवासीय नेपाली संघ कोरियाको सातौँ अधिवेशन घाेषण...
तजबिजीरुपमा खर्च गर्ने गरी सांसदहरुले मागे १० करोड...
बालुवाटार जग्गा प्रकरणः लहरो तान्दा पहरो खस्यो, बा...
Questions About Remote Employment, Shampoo, 30 Day...
हरर कमेडी ‘कोकाकोला’मा सन्नी
५० अर्बको बजेट ल्याउने प्रदेश ३ सरकारको तयारी, करक...
२७ बर्षमा पूजा, भनिन्–‘दर्शकलाई निराश बनाउदिनँ’
अमर यादवको युटर्न : प्रचण्डको हातबाट टीका लगाए !
गैँडाको आक्रमणबाट चितवनमा १ जनाको मृत्यु
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’को संरचनाको परीक्षण सफल
१४ वर्षीया किशोरी बलात्कार आरोपमा युवक पक्राउ
मकालु आधार शिविरमा ‘यति’ को पाइला भेटियो !
अष्ट्रेलियन अलराउन्डर फल्कनरले गरे आफू समलिंगी भएक...
प्रदेश २ को सरकार ढाल्ने प्रचण्डको चेतावनी
Dahal calls for NCP govt in Province 2
2,000 Gulmi people at risk of diarrhoea infection
South Indian food festival review: More than your ...
52% Nepalis believe the country is moving in right...
From the Kathmandu Press: Tuesday, April 30, 2019
सिद्धार्थ बैंकको ४ नयाँ शाखा
छाउ बार्न बाध्य पार्नेलाई सरकारी सेवा सुबिधाबाट बञ...
नेपाल टोस्ट मास्टर्सद्वारा रि-साइटेशन कार्यक्रम
लिग खेल्न सावित्रा र अनिता भारत प्रस्थान
ग्लोबल आइएमई बैंकको १३७औं शाखा माडीमा